Online Class ဖွင့်ဖို့လိုအပ်နေလား? | Online Service Center Myanmar -->
Online Class ဖွင့်ဖို့လိုအပ်နေလား?
Covid-19 ကာလမှာ သင်တန်းတွေပိတ်ထားရလို့ စိတ်ညစ်နေကြလား? မပူပါနဲ့ သင်တန်းတွေတော်တော်များများကို Online class အနေနဲ့ Stay at Home နေရင်း သင်ကြားလို့ရနေပါပြီ။
Facebook က User account တွေထဲကနေ Group တွေများစွာကို Free Create ခွင့်ပေးထားပါတယ်၊ သင့်အနေနဲ့ အပြင်ကသင်တန်းတွေကိုပိတ်ထားရလို့ စိတ်ညစ်နေရတယ်ဆိုရင် Online ကနေ သင်တန်းတွေပေးနိုင်ဖို့ Facebook ထဲမှာ အခမဲ့ Group ဖွဲ့လိုက်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
1. Group ဖွဲ့ထားပြီး ကိုယ်သင်ချင်တဲ့သူပဲရွေးသင်ပေးလို့ရလား?
ရတာပေါ့ ကိုယ့်ဆီမှာ Online class တက်ဖို့စာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေ၊ သင်တန်းကြေးသွင်းထားတဲ့သူတွေ၊ ကိုပဲထည့်ပြီး သီးသန့်သင်ပေးလို့ရပါတယ်။ သင်တန်းကာလပြီးသွားရင် သင်တန်းသားအဟောင်းကိုထုတ်ပြီး သင်တန်းအသစ်ကို ထပ်ထည့်ပေးရုံပါပဲ။
2. ကိုယ်သင်တာတွေကို အခြားသူတွေမြင်နေရမှာလား?
No.. No.. No... လို့ပဲပြောပါရစေ။
ကိုယ့် သင်တန်း Group ကို Admin ဖြစ်တဲ့သူနဲ့၊ Group ထဲက သင်တန်းသား( Member ) တွေပဲ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်သလို၊ Private လုပ်ထားပြီး Hide ပါလုပ်ထားလို့ Facebook Search box ထဲကနေ ရိုက်ရှာလို့လည်းမတွေ့နိုင်ပါဘူး၊ နောက်ဆုံး Group link ကို Member မဖြစ်ထားတဲ့သူကိုသွားပေးခဲ့ရင်တောင် Group ကို မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
3. Group ထဲမှာ သင်တန်းက ဘယ်လိုတွေပေးလို့ရလဲ?
LIVE လွှင့်ပြီးသင်လို့ရတယ်၊ Video ဖိုင်လေးတွေတင်ပြီးသင်လို့ရတယ်၊ Photo နဲ့ စာနဲ့တွဲတင်ပြီးတော့သင်လို့ရတယ်၊ နောက်ဆုံး သင်တန်းသားတွေအတွက် Group ထဲမှာ "သင်ခန်းစာ - ၁" တို့ "သင်ခန်းစာ - ၂" တို့ဆိုပြီး သင်ခန်းစာလေးတွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲခြားပြီးပြထားပေးလို့ရတာကြောင့် အလွယ်တကူရှာလို့ရမယ်၊ ကဏ္ဍတခုချင်းဆီအလိုက် လေ့လာလို့ရစေမယ်။
သင်တန်း ၁ ခါသင်ပြီး အဲ့လိုလေးသိမ်းဆည်းပေးထားလိုက်ရင် နောက်ထပ် သင်တန်းသားအသစ်ကို Group ထဲထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ထပ်သင်နေစရာမလိုပဲ ယခင်သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း တဆင့်ပြီးတဆင့်ကို လေ့လာစေဖို့ လမ်းညွှန်ပေးဖို့ပဲလိုပါမယ်။
4. Group ထဲမှာ အခြားသူတွေရော Post တင်လို့ရလား?
မရပါဘူး၊ သင်တန်းသားတွေကို Post တင်ခွင့်ပိတ်ထားလို့ သင်တန်းပေးမည့် Admin ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီး မည်သူမှ Post တင်လို့မရပါဘူး၊ ထို့အပြင် Group ထဲမှာတင်ထားတာတွေကိုလည်း အပြင်ကို Share ခွင့်ပိတ်ထားလို့ Share တဲ့ ခလုတ်လေးလည်း ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
5. Group ထဲကို အခြားသူတွေလာ Join လို့ရလား?
Join လို့မရပါဘူး၊ Group ထဲက သင်တန်းသားက သူ့အသိကိုကောက်ထည့်ရင်တောင် Admin Approved ခံထားလို့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က လက်မခံရင်၊ မထည့်ပေးရင်၊ ဘယ်သူမှ Group ထဲကို Join လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
6. ကိုယ့်နာမည်ကြီးနဲ့မသင်ချင်ဘူး၊ Page Name နဲ့သင်လို့ရလား?
ရပါတယ်၊ သင်တန်းကျောင်းရဲ့ Page ရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Page အသစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်၊ Group နဲ့ ပြန်ချိတ်ပေးထားလိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Account Name နဲ့ပဲ သင်သင်၊ Page Name နဲ့ပဲ သင်သင် ကြိုက်နှစ်သက်ရာနဲ့ ချိန်းပြီး သင်ပေးလို့ရပါတယ်။
ကဲ... ကိုယ်တိုင် Online Class Group လေးတွေကို အခမဲ့ စိတ်ကြိုက်ဖွင့်လိုက်ပါ။
ကိုယ်တိုင်မဖွင့်တတ်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်တော့ဖွင့်တတ်တယ် လိုအပ်တဲ့ Settings ချတာတွေနဲ့ ကဏ္ဍအလိုက် သင်ခန်းစာလေးတွေ ခွဲခြားသတ်မှတ်တာတွေမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Online Service Center Myanmar ကို ဆက်သွယ်ပြီး Online Class Group Settings Service ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
LIVE Chat Message - m.me/aungkyawsoe.sb
LIVE Chat Message - m.me/OSCMyanmar.mm
Mobile - 09421157911, 09794426154, 09253351244.
တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို Service တွေပေးနေ‌သေးလဲ? Service Fees တွေကရော ဘယ်လိုယူလည်းသိချင်ပါက...
OSC-Myanmar ( Online Service Center Myanmar )မှ ဝန်ဆောင်ပေးနေမှုများ => https://bit.ly/OSCMyanmarServices
မှာ အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပြီး စနည်းနာနိုင်ပါတယ်။
Advertising Facebook Knowledge Sharing